Toca Kitchen Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Toca မီးဖိုချောင်
Toca မီးဖိုချောင် APK ကို
သင်သည်သင်၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်ဆူရှီစားသောက်ဆိုင်၏ဦးခေါင်းကိုစားဖိုမှူးဖြစ်ချင်ပါသလား 👉 Toca မီးဖိုချောင်ဆူရှီ, Toca Boca ကနေနောက်ဆုံးပေါ် app ကိုထုတ်စစ်ဆေး http://bit.ly/TocaKitchenSushi_GooglePlay
သင့်အစားအစာတွေနဲ့ကစားရန်အစဉ်အဆက်လိုချင်? အခုဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်သည်! Toca Boca သင်, ချက်ပြုတ်နှင့်အတူဆော့ကစားလေးယောက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဇာတ်ကောင်စားစရာဘို့ကိုပွငျဆငျဘယ်မှာ Toca မီးဖိုချောင်, တတ်၏။ မည်သည့်ပစ္စည်း Pick နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ကြောင့်ပြင်ဆင်လော့။ အချပ်, အနာစိမ်း, ကြော်, ထမင်းချက်, မိုက်ခရိုဝေ့သို့မဟုတ်ရောနှော! သို့ပြုလျှင်သင်၏ဆာလောင်မွတ်သိပ်မိတျဆှေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ပါ။
ကျနော်တို့ကလေးတွေရွှံ့ကိတ်မုန့်အသစ်တစ်ခုမကျြနှာကိုပေးစေခြင်းငှါအဘို့ဤပညာရေးဆိုင်ရာ app ကို, အလေးတွေခစျြလိမျ့မညျအရာပြည့်စုံကို virtual ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများ created! ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာများရန်ဇာတ်ကောင်ကြောက်တုံ့ပြန်မှုကိုသင်ရယ်ငါဖြစ်စေမည်။ ငန်ငါးကဲ့သို့ကြောင်ပါသလား ကောင်လေးကအာလူးနဲ့အစိမ်းရောင်ကိုစားကြလိမ့်မည်နည်း ရောထွေးနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်မုန့်ညက်ကိုက်ညီ! အဘယ်သူမျှမမြင့်မားသောရမှတ်များ, အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်အချိန်နှင့်အတူပျော်စရာဒီချက်ပြုတ် app ထဲမှာအဆုံးသတ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးန့်သတ်။
- မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာနှင့်အတူအသီးအသီး - လေးချစ်စရာဇာတ်ကောင်များအတွက်ချက်ပြုတ်ရန်!
- 12 ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်ကိုပြင်ဆင်နိုင် 180 ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများ!
- အချပ်, အနာစိမ်း, ကြော်, ထမင်းချက်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်မိုက်ခရိုဝေ့ဘာမှ!
- Professional နဲ့ပျော်စရာလေးတွေ app ကိုဒီဇိုင်း!
- Kid-ဖော်ရွေ interface ကို
- အဘယ်သူမျှမအတွက်-app purchase
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာအရချက်ပြုတ် start ကြပါစို့
Toca မီးဖိုချောင်စားဖိုမှူးအယောင်ဆောင်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသောင့်လေးတွေများအတွက်အခမဲ့ချက်ပြုတ် App ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကစားရန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖောက်သည်များအတွက်အရသာနှင့်ရီစရာအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရန်နည်းလမ်းရှာဖွေစူးစမ်းတစ်မီးဖိုချောင်အတွက်စားဖိုမှူး roleplay ပါလိမ့်မယ်။ app ကိုချက်ပြုတ်ဒါကပျော်စရာကလေးတွေအဘို့အဘယ်အရာကိုမျှမဒါပေမယ့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကယ်နှုတ်တော်မူရန်သေချာပါ!
အားလုံး Toca Boca apps များနှင့်ဝသကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမမြင့်မားသောရမှတ်များ, အချိန်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဂီတရှိပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာလေးတွေရဲ့လေးတွေသို့သော်သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားပါစေဘို့ဒီ app ကိုစိတ်ချပါ!
TOCA Boca အကြောင်း
Toca Boca မှာကျနော်တို့ကလေးတွေ '' စိတ်ကူးစိတ်သန်းတို့အချင်းများနှင့်သူတို့ကမ္ဘာကြီးကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကူညီရန်ကစား၏တန်ခိုးကိုယုံကြည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အပျြောဖြစ်လေးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လေးတွေ '' ရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုဖြစ်ဖို့နဲ့သူတို့ဖြစ်လိုသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် 130 နိုင်ငံများတွင်ထက်ပို 215 သန်းကြိမ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်နဲ့ပျော်စရာပူဇော်ခဲ့ကြကြောင်းဆုရ apps များ, လုံခြုံ, ဖွင့်ကစားအတွေ့အကြုံများပါဝင်သည်။ tocaboca.com မှာ Toca Boca နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သီးသန့်လုံခြုံရေးကျွန်တော်အလွန်အလေးအနက်ထားယူထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ http://tocaboca.com/privacy: ငါတို့သည်ထိုအမှုကိစ္စရပ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပုံကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, ငါတို့ privacy ကိုမူဝါဒအဖတ်ပါ
- setting များကိုအချို့သောကိရိယာများပေါ်တွင် crash မယ်လို့ဘယ်မှာပြဿနာ Fixed
93.33 ကို MB